Lelee ego dollar, ị ga-ahụ nọmba Oghere Usoro ahụ. Na nlele, ị ga-ahụ usoro ntụgharị na nọmba akaụntụ. Kaadị akwụmụgwọ gị nwere nọmba kaadị kredit. Nọmba ndị a na-abanye na otu ebe - ma na nchekwa data gọọmentị ma ọ bụ usoro ụlọ akụ. Ka ị na-ele dollar, ị maghị ihe akụkọ ya bụ. Ikekwe ezuru ya, ma ọ bụ ikekwe ọ bụ nke adịgboroja. Kasị njọ, etiti